Keeg isbuunyo aasaasi ah oo leh qorfe | Cunnooyinka jikada
Keeg qorfe aasaasi ah
Maria vazquez | 08/05/2021 10:00 | Postres, Cajiin
Ma raadineysaa cunto keeg ah oo si fudud loo xasuusto? Waad sameyn kartaa keeggan qorfe ee aasaasiga ah meel kasta oo aad tagtid, maxaa yeelay waxaad u baahan doontaa oo keliya sacab muggiis oo ah maaddooyinka aasaasiga ah iyo galaas biyo ah tixraac ahaan si loo xisaabiyo tirada. Maxaa intaa ka badan, xafiditaanka cuntada ayaa noqon doonta ciyaarta ilmaha mar aad sameysay dhowr jeer.
Marka laga soo tago fudeydkeeda, waxaad sidoo kale jeclaan doontaa cabirka keeggan labadaba, oo ku habboon munaasabadahaas markaan qoysaska ku soo ururinno guriga, iyo faafitaankiisa. Shaki kuma jiro, mid ka mid ah keega ugufiican ee aan abid dhadhamiyo Waxayna sidaa ku ahaan kartaa ilaa saddex maalmood haddii si adag loo keydiyo.
Ha dareemin inaad isku daydo? Foornada dhig si aad u kululeyso waxaadna ku diyaarin doontaa keeggan saacad uun. Adeegso qaab ugu yaraan 22 cm ah dhexroor leh derbiyada xoogaa yar. Sidaan horayba ufilaayay, keegani waa mid weyn oo aad uga kacsan foornada. Hubso inay jiraan ugu yaraan 3cm laga bilaabo dusha cajiinka ilaa geeska caaryada. Cidna ha u oggolaan inay foornada haysato 40-ka daqiiqo ee ugu horraysa haddii kale way kugu dhici doontaa aniga oo kale oo qaabkeedu wuxuu noqon doonaa mid fool xun.
Keeggan rootida ah ee isbuunyada isbuunyada ah layaab ku leh fudeydkiisa, baaxadiisa weyn iyo qalafsanaantiisa. Ma rajeyneyso isku daygeeda?
Waqtiga karinta: 55 m
Wadarta waqtiga: 1 saac 10 daqiiqo
4 ukumo L
2 koob oo sonkor ah
Galaaska 1 caano
1 koob oo saliid ah gabbaldayaha
1 Soosaarida faniinka shaaha
3 koob oo bur ah
1 sachet oo khamiir ah
Waxaan kululeyneynaa foornada illaa 180ºC.
In baaquli waxaan garaacnaa ukunta iyo sonkorta ilaa isku darku kafiicmayo.
Kadib, adigoon joojin garaacista, waxaan ku darnaa inta hartay ee dareere ah, mid mid.
Markay isku jiraan, waxaan ku darnaa burka, khamiirka iyo qorfe la miiray, oo ku qas dhaqdhaqaaqyada daboolan, ilaa laga helo cajiinka isku midka ah.
Kadib waxaan dufannaa caaryada ama waxaan ku xardhaynaa warqad duban oo ku shub cajiinka.
Waxaan dubnaa 180ºC ilaa keega la kariyo, ilaa 55 daqiiqo. .
Marka aan dhammeyno, waxaan ka qaadnaa keegga foornada oo waxaan u oggolaanay inay xanaaqdo 10 daqiiqo illaa kala fur xarigga siligga oo ha u qaboojiyo gebi ahaanba.
Wadada buuxda ee maqaalka: Inicio » Suxuunta » Postres » Keeg qorfe aasaasi ah
Salad baradhada leh kalluunka salmon, tufaax iyo jiis la kariyay